अमेरिकामा सडक दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका नेपाली युवा पृथ्वी लम्सालको शव नेपाल पठाईएको छ । गत मे १ मा न्युयोर्कबाट भर्जिनिया फर्कदै गर्दा न्युजर्सीमा भएको सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका लम्सालको शव विहिबार नेपाल पठाईएको हो ।
अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्यको नर्थइस्टर्न युनिभर्सिटीबाट उच्चशिक्षा हासिल गरेर कामको सिलसिलामा भर्जिर्निया रहँदै आएका लम्साल
मे १ का दिन न्युयोर्कमा रहेका साथीहरूलाई भेटेर भर्जिनिया फर्कदै गर्दा लम्सालको न्युजर्सीमा सडक दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो ।
लम्सालको आमा–बाबाको इच्छा अनुसार उनको पार्थिव शरीर विहीबार साँझ न्युयोर्क स्थित जेएफके अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौं पठाईएको हो ।
निधन भएका लम्सालको शव नेपाल पठाएको जानकारी दिंदै मेरिल्याण्ड हाउस अफ एसेम्बेली सदस्य डेलिगेट ह्यारी भण्डारीले गहिरो दुख व्यक्त गरेका छन् ।
भण्डारीले पृथ्वी लम्साल एक नेपाली युवा मात्र नभई एक सुन्दर अमेरिकी सपना पनि भएको बताउँदै भण्डारीले उनको जिन्दगी सँगै त्यो सपना एउटा काठको बाकसमा बन्द भएर नेपाल फर्कनु आफ्ना आगि अत्यन्त पिडादायि समय भएको अभिव्यक्ती दिएका छन् ।
यस्तो छ लम्सालको निधनप्रति भण्डारीले जारी गरेको शोक वक्तव्य
आज अर्को काठको बाकसमा बन्द गराएर पठाइयो जिन्दगी र मृत-सपना
कामना गरौं, नेपाल पठाइने यो यस्तो अन्तिम काठको बाकस होस् !
पृथ्वी लम्साल एक नेपाली युवा मात्र थिएनन्, एक सुन्दर अमेरिकी सपना पनिथिए। अब उनको जिन्दगीसँगै मृत्यु भएको त्यो सपना एउटा काठको बाकसमा बन्द भएर नेपाल फर्कदैछ। उनको आमा-बाबाको इच्छाअनुसार पार्थिव शरीर विहीबारसाँझ न्युयोर्कस्थित जेएफके अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौंपठाउने प्रवन्ध गरिएको हो। मेरो कार्यालयको संयोजनमा यो प्रवन्ध भएकोमा मलाई एक किसिमको सन्तोष मिले पनि अर्को एक नेपाली युवाको पार्थिव शरीरनेपाल पठाउनु पर्दाको पीडाले मलाई नराम्ररी ऐठन भएको छ। यस कार्यमा सहयोग गर्ने वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूताबास, काठमाडौंस्थित अमेरीकी दूताबासर न्युजर्सीस्थित फनेरल होम विशेष धन्यवादका पात्र छन् । यसैगरी, यस पुनित कार्यमा सहयोग गर्ने प्रवीण भण्डारी, रघु भट्टराई, लेनिन कंडेल,विष्णुहरि लामिछाने, डा. वसन्त सिग्देल, विवेक राई, विष्णु राई, शिवमिश्र, कृष्ण रानाभाट, प्रवीण परियारलगायतका तमाम सहृदयी महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको अनवरत साथ, सहयोग र प्रयत्यबिना यो पुनितकार्य सम्भव हुने थिएन।
पृथ्वी अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्यको नर्थइस्टर्न युनिभर्सिटीबाट उच्चशिक्षा हासिल गरेर कामको सिलसिलामा भर्जिर्निया बस्दै आएका थिए। गत मे १मा न्युयोर्कमा रहेका साथीहरूलाई भेटेर भर्जिनिया फर्कदै गर्दान्युजर्सीमा भएको एक सडक दुर्घटनामा उनको दु:खद निधन भएको थियो।
पृथ्वीको यो असामयिक निधन परिवारका लागि त अपूरणीय क्षतिको विषय हो नै,नेपाली जनजनका लागि पनि एक पीडादायी परिघटना हो। म उनको दीवगंत आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।
अमेरिकामा बढ्दो नेपाली डायस्पोरासँगै असमायिक दु:खद निधन हुने नेपालीकोसंख्या पनि बढ्दो छ। वितेका दुई वर्षयता मात्र असामयिक निधन भएका एक दर्जनभन्दा बढी नेपालीको पार्थिव शरीर नेपाल पठाउनु परेको छ भने रत्यतिकै संख्यामा अरू नेपालीको दाहसंस्कार अमेरिकामै गर्ने प्रवन्ध मिलाउनु परेको छ।
म कामना गर्दछु कि अमेरिकामा यस्तो अप्रिय मृत्यु वरण गर्ने पृथ्वीअन्तिम नेपाली युवा बनुन्। मलाई यो पनि थाहा कि सबै प्रिय चाहना पूरा हुदैनन्, तर पूरा हुँदैनन् भनेर हामीले यस्ता प्रिय कामनाहरू गर्नै छोड्नु हुदैन। म अमेरिकामा रहेका सबै नेपाली महानुभावहरूलाई जीवनलाई माया गर्न र आफन्तलाई शोकमा डुबाउने गरी हेलचेक्राइ नगर्न सादर अनुरोध गर्छ।
सतर्कतापूर्वक सबै क्रियाकलाप गर्दागर्दै पनि आइपर्ने भवितव्यमा सहयोगी हात र मन भएर पुण्य कमाउन पनि आव्हान गर्दछु।
– डेलिगेट ह्यारी भण्डारी, पीएचडी